Gungwa rine zviwanikwa zvakasiyana siyana zvinokwanisa kugadzira simba | Green Renewables
Nuria | | Simba remhepo, Wave Simba, Renewable simba, Nyowani matekinoroji
Mukati memhando dzakasiyana dze simba rinowedzeredzwa, idzo dzine gungwa senzvimbo yadzo yekutanga ndidzo dzinonyanya kushanda. Chirevo ichi chinobva pachokwadi chekuti sezvo pasina "mimvuri" mumakungwa, zviwanikwa zvakaita semhepo, semuenzaniso, zvinogona kushandiswa zvizere. Mune mamwe mazwi, hapana zvipingamupinyi uye mhepo inogona kunyatsoshandiswa mune zvemagetsi emagetsi emagetsi, ayo ane mashizha awo makuru anounganidza mhepo zvishoma nezvishoma uye oishandura kuita simba muzinga repamusoro.
Pasina mubvunzo, mhepo yekumahombekombe ndiyo yakave yakanyanya kudzokorodzwa yerudzi rwayo, yatove pakupera kwa2009 yaive iine simba rakaisirwa zviuru zviviri nemazana matanhatu Mw uye kunyangwe paine vatungamiriri mubato seDenmark neUnited Kingdom, nyika dzakaita seChina dziri vakazvipira kuwedzera simba ravo, uye kuvandudza kutsvagisa kwakawanda, kuvandudza uye hunyanzvi hweinjiniya iyo inobvumidza kushandiswa kukuru kweiyo mapurazi emhepo ekumahombekombe nekuvandudza turbines emhepo iyo inogona kushanda zvakanaka kubva kugungwa.
Asi mugungwa ndipo panobva zviwanikwa zvinoverengeka, mupfungwa iyi simba rinogadzirwa nemafungu (simba wave mota) inogona zvakare kushandurwa kuita magetsi.
Kunyangwe isina kugadzirwa zvishoma, ine tekinoroji yekuyedza:
- Zvivakwa zvakasungirirwa pamhenderekedzo yegungwa kana pagungwa (chizvarwa chekutanga).
- Zvivakwa zveoffshore zvine zvinhu zvinoyangarara kana pasi pazasi pemvura (chizvarwa chechipiri).
- Zvivakwa zveOshore, mumvura yakadzika ine muganho wemamita zana, ine zvinhu zvinoyangarara kana zvakanyura zvevateresi (chizvarwa chechitatu).
- Munyika yeBasque chirongwa chiri kuvandudzwa netekinoroji inonzi Kudzora Mvura Column umo kufamba kwemasaisai kunounza kumanikidza pavhoriyamu yemhepo iri muchikamu chakanyudzwa-mukati, zvine simba rakaringana kuti mweya iwoyo uyenderere nekushandisa turbine.
- Mimwe michina iri absorbers kana attenuators, iyo inotora mukana wekufamba kwemasaisai kugadzira simba remagetsi rinoshandurwa kuita magetsi.
- Humwe hutekinoroji hwakavakirwa pa kufashukira masisitimu uye ma terminator.
Izvo ndezve kutora mukana wekumuka uye kudonha kwegungwa uko mafungu anogadzira. Nhungamiro ndeyekuti tangi remvura rinozadzwa pamvura yepamusoro uye rinodurura pakadzika mafashama, kana mwero wemvura pakati pegungwa netangi wasvika pane imwe nhanho, mvura inopfuurwa neiyi turbine inoburitsa simba remagetsi. MuFrance (La Rance) kune nzvimbo yakadaro.
Sisitimu iyi ine zvayakaipira: kukwirira kwemasaisai kunofanira kudarika 5 metres, chinova chipimo nekuti chiitiko ichi chinosangana mune dzimwe nzvimbo chete. Kukanganisa kwechipiri ndeiko kukanganisa kwezvakatipoteredza yakakwira sezvo aya mamiriro anoitika munzvimbo dzeakakosha zvisikwa zvegungwa.
Oceanic yekupisa kupisa
Ndiwo mutsauko wetembiricha pakati pegungwa uye nemvura yakadzika, iyo tembiricha mutsauko inofanirwa kuve yakakura kudarika 20º C (nzvimbo dzedutu neeoptical).
Iyo tekinoroji iyo ichangotanga munyika senge India, Japan neHawaii.
Inoreva kushandiswa kwemusiyano wekumanikidza pakati pemvura nyoro kubva munzizi nemvura ine munyu kubva mugungwa. Kambani yeNorway inobata Statkraft inogadzira chirongwa muOslo fjord nemitemo iyi.
Izvo zvinoenderana nemusiyano uripo pakati pehunhu hwemunyu pakati pemvura yemurwizi nemvura yegungwa. Kana idzi mvura dzikasangana, simba rinogadzirwa iro rinogona kushandurwa kuita magetsi.
Gungwa rinopa simba rakawanda asi matekinoroji ekushandisa iwo achiri muchikamu chekuyedza, kunze kwemhepo yekumhiri kwemakungwa, iyo yatokwikwidza kare.
Chipingamupinyi chikuru ku simba remumvura ndiyo mutengo wakakwira wekushandisa kwayo, izvi zvadzora kukura kwayo zvichienzaniswa nezvimwe simba rinowedzeredzwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Renewable simba » Simba remhepo » Gungwa rine zviwanikwa zvakasiyana siyana zvinokwanisa kugadzira simba
Pindura kuna XXD
Ngarava dzepamusoro uye kusvibiswa kwavanogadzira
Midhudhudhu yemagetsi kumapurisa